Kangton - Mayelana Nathi - Kangton Industry, Inc.
I-Kangton Industry, Inc. ungumphakeli wezixazululo eziphakeme we-Commercial Floor, Door kanye neKhabhinethi.
Kusukela ngo-2004, besilokhu sabelana ngemakethe enhle emhlabeni wonke, ikakhulukazi eNyakatho Melika, eYurophu, e-Australia naseNingizimu Melika.
I-Commercial Vinyl Flooring, i-Hardware SPC Flooring, i-Hardwood Engineered Flooring, i-Wood SPC Flooring, i-Laminate Flooring, i-Bamboo Flooring ne-WPC Decking
Umnyango Wokuqala, Umnyango Wokhuni, Umnyango Olinganiswe Ngomlilo, Umnyango Wokungena Okuqinile
IKhabhinethi Yekhishi, Izembatho, kanye neVanitory
Nge-CE, i-Floorscore, i-Greengard, i-Soncap, izitifiketi ze-FSC kanye nokuhlolwa yi-Intertek ne-SGS.
Imikhiqizo yethu isezingeni eliphakeme lekhwalithi, yamukelwa ngempumelelo ngumkhiqizo omkhulu, ingcebo, umakhi kanye nenkampani ethengisa kakhulu emhlabeni wonke.Ungathola izinto zethu kumaphrojekthi ahlukene eNyakatho Melika, eYurophu, e-Australia, eSouth East Asia, eNingizimu Melika, eMi- EMpumalanga nase-Afrika.
I-Kangton khetha ozakwethu abanamasu namazinga ekhwalithi aphesheya. Silawula ngokuqinile ikhwalithi futhi sinikeza ukuhlolwa kwe-QC ngesikhathi sokukhiqiza nangaphambi kokulayisha. Wonke amaklayenti ethu azothola umbiko we-QC ngezithombe eziningiliziwe ngokuthunyelwa ngakunye. Sinesibopho sentengo yokuncintisana enamandla, ikhwalithi ephezulu nokuthuthukisa umkhiqizo omusha.
Insizakalo ye-DDP iyatholakala, ifaka phakathi ukuthunyelwa, intela, intela, nezindleko zomnyango. Inhloso yethu ukudala inani elengeziwe kumakhasimende ethu futhi sikhule ndawonye.
Noma yini oyidingayo emnyango, phansi noma kwikhabhinethi, sikholwa ukuthi uKangton uzokunikeza isisombululo esihle kakhulu sobuchwepheshe.
E-Kangton, uzothola umnyango ophakeme wezohwebo, phansi nekhabethe ukufanisa ikhaya lakho kahle.
E-Kangton, uzokonga izindleko nesikhathi esiningi kakhulu sezidingo zakho.
KwaKangton, uzothola isisombululo esithembekile sobuchwepheshe kanye nensizakalo enhle kakhulu.
Kusukela ngo-2004, Kangton Industry, Inc. kufakwe insimu yezinto zokwakha ngokusekelwa kwezitifiketi ze-ISO, CE. Ngokwenyuswa okuqinile kwe-B2B nemibukiso, uKangton waziwa ngokushesha ngabathengi bamazwe aphesheya, abathuthukisi kanye nezinkampani ezithengisa izindlu, ukuba ngomunye wabahlinzeki bezisombululo zamaphrojekthi ezinamandla kakhulu futhi ezihola phambili eChina.
I-Kangton inikela ngobubanzi obubanzi kakhulu, inikela ngezinketho eziningi ezahlukahlukene ukuze ivumelane nakho konke ukunambitheka, indawo yokuhlala noma ezentengiso, zangaphakathi noma zangaphandle, ezendabuko noma ezesimanjemanje, zakudala noma ezithandwayo, ezilula noma ezikhethekile. I-OEM nayo yamukelekile. Ukuba nendlu eyingqayizivele akuyona iphupho eKangton.
Ulayini wokukhiqiza wokuqala wekilasi nezinto zokusebenza ezingenisiwe ezivela eJalimane naseJapan, zenza iKangton Door, i-Floor neKhabhinethi kube yizinga eliphezulu. Inqubomgomo yokulawulwa kwekhwalithi eqinile ebheke kunoma iyiphi inqubo ngesikhathi sokukhiqiza iqinisekisa ukuthi ikhwalithi ye-kangton iphezulu kakhulu e-China. Isibonelo, izinkuni esizikhethile zihlukaniswe zaba ibanga le-A, B, C, D ngomlilo omisiwe okuqukethwe okungamanzi ayi-8-10%. Ithimba elizimele le-QC lihlanganisa zonke izimpahla ezithunyelwe ngaphambi kokuthunyelwa. UKangton unikela ngempahla ezokwanelisa kahle.
Ukuba ngabaninimasheya efektri ngokusebenzisa imali imali yindlela uKangton angathola ngayo ikhotheshini ephansi efektri. I-Kangton ithumela ngaphandle iminyango yama-pcs ayi-120,000 ngonyaka, ukuthenga okuningi kwenza iKangton ngamanani entengo amahle kakhulu. Ngaphandle kwalokho, ukusiza amakhasimende athole inzuzo ethe xaxa futhi abe nokuncintisana kwentengo ezimakethe zawo, uKangton ugcina umkhawulo wenzuzo ephansi. Lezi zinto ezintathu zikuqinisekisa ukuthi ukhokha izindleko eziphansi kakhulu ngokusebenza neKangton.
Khetha uKangton kusho ukuthi ukhetha iqembu lobuchwepheshe elisebenzele ukukusebenzela. Onjiniyela bethu bebekhona emkhakheni wezinto zokuhlobisa iminyaka engaphezu kwengu-17 futhi bekwazi ukukunikeza ukukhetha okubanzi kunakho konke ekwakhiweni, ekwakhiweni nasekufakweni.
I-Kangton ithengiselwe amazwe emhlabeni wonke kubandakanya i-USA, Canada, European Union, Australia,
IJapan njll., Enika iqembu lokuthengisa leKangton ngolwazi olugcwele nolwazi maqondana nezidingo zemakethe.
Uyemukelwa bese ukhetha i-Kangton
ngokubambisana singakha ikusasa eliqhakazile.